Rayson | akwa zuru oke na igbe mmiri
Mepụta afọ gara aga, Rayson bụ onye na-emepụta ọkachamara na kwa onye na-eweta ike siri ike na mmepụta, chepụta ya, na R & D. Ulo mmiri zuru oke na igbe igbe anyị nwere ndị ọrụ ọkachamara nwere ahụmịhe nke ahụmịhe na ụlọ ọrụ. Ọ bụ ha na-enye ndị ahịa ọrụ dị elu karịa ụwa. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ gbasara ngwaahịa ọhụrụ anyị nke ọma matraged akwa na igbe ma ọ bụ chọọ ịmatakwu banyere ụlọ ọrụ anyị, nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị. Ndị ọkachamara anyị ga-ahụ n'anya inyere gị aka n'oge ọ bụla. Ngwaahịa ahụ nwere ike ịchọrọ. Ọ nwere ike guzoro na-eyi na ịsacha na-enweghị isi ma ọ bụ eriri na-atọgbọ.